Hiran State - News: Tartanka ciyaarahii ka socday magaalada Belet Weyne oo meel xasaasi ah maraya
Tartanka ciyaarahii ka socday magaalada Belet Weyne oo meel xasaasi ah maraya
HS:- Caasimada Hiiraan ee Belet Weyne waxaa ka socda ciyaarahii kubada cagta oo ay isku arkayaan kooxaha ka dhisan xaafadaha ay ka kooban tahay magalada Belet weyne.
Tartankani oo loogu magac daray Kulmis maadaama ay dhalinyaradu mudo kala maqnaayeen ayaa waxaa soo qaban qaabiyey dhalinyaro reer Hiiraan ah oo intooda badan ku nool dalka dibadiisa.
magaalada Belet Weyne oo caan ku ah ciyaaraha kubada cagta ayaa waxey dadweynaha ku nool magaalada ay siweyn u hadal ahayaan halka ay dhalinyaradani ku diyaarsanayeen walow la sheegay ineysan awalba meel dheer jirin oo ay ku sugnaayeen dhulka beeraleyda ah kadib markii ay intooda badan magaalada uga carareen kooxahii ka talin jiray oo is hor taag ku sameyey dhamaanba qeybahii kala duwanaa ee ciyaaraha.
Kooxaha ilaa hada ciyaaray ayaa intooda badan soo bandhigeen ciyaaro xiiso badan oo soo jiitay dadweynahii daawanayey, iyadoona ay hada ciyaaruhu marayaan meel xasaasi ah oo ay koxkasta qalbiga gelisay inuu u muuqdo koobkii.
Marka aad joogto koobaha lagu qaxweeyo dadweynuhu waxey ka shegeeyaan hadba ciyaartii maalinkaas dhacda iyo sida ay u kala badiyeen iyadoona karoonka uu ka dhaco ciyaaraha ay u daawasho tagaan rag horey u soo ahaan jiray ciyaartooy hadase noqday howl gab.
Sikastaba waxaa dib u bilaawday tartankii ciyaaraha Hiiraan iyadoona laguwado in tartanka midkaan xiga ay isku arki doonaan dhamaan degmooyinka ay ka kooban tahay Hiiraan.
· admin on February 20 2012 15:30:59 · 0 Comments · 1826 Reads ·
14,638,032 unique visits